मेट्रोनिडाजोल साइड इफेक्ट, विरोधाभास, र चेतावनी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार प्रेस खेलहरु चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर भारी खेल स्वास्थ्य
मुख्य >> औषधि जानकारी >> मेट्रोनिडाजोल साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
मेट्रोनिडाजोल साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
औषधि जानकारी मेट्रोनिडाजोल एन्टिबायोटिक हो जुन केही ब्याक्टेरिया र परजीवी संक्रमणहरूको विकास रोक्न प्रयोग गरिन्छ। मेट्रोनिडाजोल फ्ल्यागेल र फ्लागेल ईआर ब्रान्ड नाममा बेचिन्छ।
मेट्रोनिडाजोल साइड इफेक्टहरू | गम्भीर दुष्प्रभाव | साइड इफेक्टहरू कति लामो हुन्छ? | चेतावनी | अन्तर्क्रिया | कसरी साइड इफेक्टबाट बच्ने
मेट्रोनिडाजोल एक एन्टिबायोटिक हो जुन छाला संक्रमण लगायतका केही ब्याक्टेरिया संक्रमण र परजीवी संक्रमणको विकास रोक्न प्रयोग गरिन्छ। जीवाणु वाहिनोसिस (BV), ट्राइकोमोनिआसिस , र श्रोणि सूजन रोग (PID)। यो फोडाको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेट्रोनिडाजोल फ्ल्यागेल र फ्लागेल ईआर (विस्तारित-जारी) ब्रान्ड नाममा बेचिन्छ। यो मौखिक औषधि, योनी जेल, क्रीम, वा लोशनको रूपमा आउन सक्छ। मेट्रोनिडाजोलको IV फारम पनि छ जुन केहि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अस्पतालको सेटिंगमा प्रयोग गर्ने छन।
त्यहाँ धेरै सामान्य दुष्प्रभावहरू छन् जसमा टाउको दुख्ने, ऐंठन, र मतली लाग्ने छ। सामान्यतया, सामयिक र योनी उपचार विकल्पहरूको साथ कम साइड इफेक्टहरू छन्। मेट्रोनिडाजोल लिँदा ड्रग अन्तरक्रिया पनि सम्भव छ, त्यसैले उपचार सुरु गर्नु अघि जोखिमहरू बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सम्बन्धित: मेट्रोनिडाजोलको बारेमा बढि जान्नुहोस्
मौखिक मेट्रोनिडाजोलको सामान्य साइड इफेक्टहरू
मेट्रोनिडाजोल ट्याबलेट र क्याप्सुलको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू:
भोक कम गर्नु
पेट दुखाइ वा क्र्याम्पि
लाइटहेडनेस वा चक्कर
मुखमा धातुको स्वाद
मुख, ओठ, वा जिब्रो को जलन
गाढा मूत्र (रातो / खैरो रंग)
मतली र पखाला
मतली र पखाला मेट्रोनिडाजोलको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभाव हो। यस अनुसार संघीय औषधि प्रशासन , लगभग १२% मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट लिने बिरामीहरूले मतली अनुभव गरिरहेका रिपोर्ट गर्छन्, जुन कहिलेकाँही झाडापखालाको साथ हुन्छ। मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेटहरू खानाको रूपमा लिन सकिन्छ वा खाजा खाजा पेटको पेट कम गर्न मद्दत गर्न। जे होस्, मेट्रोनिडाजोलको विस्तारित-रिलीज संस्करण खाली पेटमा खानु पर्दा कम्तिमा एक घण्टा अगाडि वा खानेकुराको दुई घण्टा पछि लिनुपर्दछ।
यदि आन्द्राको पक्ष प्रभाव एक चिन्ता हो भने, व्यक्ति संक्रमण को प्रकार को लागी उपयुक्त छ भने मेट्रोनिडाजोल को सामयिक वा योनि रूप निर्धारित गर्न सकिन्छ। मेट्रोनिडाजोलको यी रूपहरू छन् मतली र पखाला हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
सामयिक र योनी मेट्रोनिडाजोलको सामान्य साइड इफेक्टहरू
मेट्रोनिडाजोल योनी जेल, क्रीम, र लोशनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू:
हल्का ड्राईनेस वा जल्दो उत्तेजना सहित छालाको जलन
टाउको दुखाई (केवल योनि जेल)
योनि डिस्चार्ज (योनि जेल मात्र)
खमीर संक्रमण (योनि जेल मात्र)
मेट्रोनिडाजोललाई खमीर संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गर्नु हुँदैन (खमीर संक्रमण)। वास्तवमा, मेट्रोनिडाजोलको प्रयोगले केहीमा खमीर संक्रमण हुन सक्छ। यो अनुमान गरिएको छ १०% महिला मेट्रोनिडाजोल लिने उपचारको साइड इफेक्टको रूपमा खमीर संक्रमणको साथ।
जबकि मेट्रोनिडाजोल खराब ब्याक्टेरियाबाट छुटकारा पाउनको लागि प्रभावकारी छ किनकि संक्रमणको कारण हुन्छ, यसले सहयोगी ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि नष्ट गर्न सक्छ जुन सामान्यतया योनीमा बस्ने। यसले योनीको वातावरणमा खलल ल्याउन सक्छ र खमीरको अत्यधिक वृद्धि गर्न सक्छ।
एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्दा प्राय जसो खमीर संक्रमण हुने महिलाहरूको लागि, उनीहरूको डाक्टरले उनीहरूलाई एन्टिफंगल औषधि जस्तै: डिस्लुकान (फ्लुकोनाजोल) ।
मौखिक मेट्रोनिडाजोलको गम्भीर साइड इफेक्टहरू
मेट्रोनिडाजोल ट्याबलेट र क्याप्सुलको गम्भीर साइड इफेक्टहरू:
चिया रूख को तेल खमीर संक्रमण को उपचार को लागी
अप्टिक नर्भलाई क्षति
एनाफिलाक्सिस (गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रिया उत्पादन छाता र अनुहार र घाँटी को सूजन)
स्टीभन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम (औषधी प्रेरित सिंड्रोम फ्लू जस्तो लक्षण र पीडादायी दाग ​​पैदा गर्ने)
विषाक्त एपिडर्मल नेक्रोलिसिस (दुर्लभ तर गम्भीर छाला सर्तको कारण ब्लासि and र पिलिंग)
कम सेता रक्त कोषहरू
न्यूट्रोपेनिया (कम न्युट्रोफिल)
अग्नाशयशोथ (अग्न्याशय को सूजन)
लामो क्यूटी अन्तराल (हृदय क्रियाकलापमा गडबडी विशेष गरी यदि क्यूटी अन्तराललाई लामो पार्ने अन्य औषधीहरूको साथ लिइन्छ भने)
मेट्रोनिडाजोल साइड इफेक्ट कहिलेसम्म रहन्छ?
मेट्रोनिडाजोलको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू उपचार समाप्त हुने बित्तिकै सुधार हुनेछ। संक्रमणको प्रकारमा निर्भर गर्दै, व्यक्तिले केवल एक दिन वा १ 14 दिनसम्म मेट्रोनिडाजोल प्रयोग गर्न सक्दछन्। यदि पखाला वा गम्भीर बान्ता भयो भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक व्यक्तिलाई बिभिन्न औषधिमा स्विच गर्न सक्दछ।
केहि गम्भीर साइड इफेक्ट को लागी एक व्यक्ति को मेट्रोनिडाजोल संग उपचार बन्द गर्न को लागी हुन सक्छ। मेट्रोनिडाजोलको साथ एलर्जीको प्रतिक्रिया दुर्लभ छ, तर अझै सम्भव छ। व्यक्तिहरूले आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ र तुरून्त प्रयोग बन्द गर्नुपर्दछ यदि उनीहरूले अ severe्गार, सास फेर्ने समस्या, गम्भिर खुजली, वा अनुहार वा घाँटीको सूजन सहित बढी गम्भीर प्रतिक्रियाको कुनै संकेत देखा पर्‍यो भने।
मेट्रोनिडाजोल contraindication र चेतावनी
मेट्रोनिडाजोल सबैको लागि सही उपचार नहुन सक्छ। केहि व्यक्ति मेट्रोनिडाजोलप्रति बढी संवेदनशील हुन सक्छन्, अन्य औषधि विकल्पहरूलाई उत्तम फिट बनाउँदछन्। यदि विगतमा मेट्रोनिडाजोल लिने बित्तिकै व्यक्तिलाई एलर्जी भएको छ भने, उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई बताउन निश्चित गर्नुपर्दछ। अर्को प्रतिक्रियाबाट बच्नको लागि तिनीहरूले फरक एन्टिबायोटिक लिने बारेमा छलफल गर्नुपर्दछ।
भाग्यवस, मेट्रोनिडाजोल निर्भरता सिर्जना गर्दैन। औषधिको उच्च खुराकले गम्भीर मतली र बान्ता, साथै मांसपेशी समन्वयको कमी (अटाक्सिया) निम्त्याउन सक्छ। यदि ओभरडोज अपेक्षित छ भने, मानिसहरूले आफ्नो स्थानीय विष नियन्त्रणलाई कल गर्नुपर्दछ वा आपतकालीन कोठामा मूल्या for्कनका लागि जानु पर्छ।
यदि कसैलाई कलेजो रोग छ भने, मेट्रोनिडाजोल उत्तम उपचार विकल्प नहुन सक्छ। किनभने मेट्रोनिडाजोल कलेजोमा प्रशोधित हुन्छ, यसले कलेजोमा विषाक्तताको बढ्दो जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यस जोखिमको बावजुद, कलेजो रोग भएका व्यक्तिहरूले अझै सुरक्षित रूपमा मेट्रोनिडाजोल लिन सक्छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू निर्धारित गर्न सक्षम हुनेछन् कि यदि तिनीहरूको बिरामीले मेट्रोनिडाजोल लिनबाट जोगिनु पर्छ कि पर्दैन।
मेट्रोनिडाजोल एक औषधी हो जुन जब्ती थालनी कम गर्न सक्छ। यसको मतलब एक व्यक्तिलाई यो औषधि लिने बखत दौडने सम्भावना धेरै हुन्छ। दौरा वा अपस्मारको इतिहास भएका व्यक्तिहरूले यो औषधि लिनु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट चिकित्सकीय सल्लाह लिनु पर्छ। यदि यस औषधिको साथ उपचार अझै आवश्यक छ भने, अतिरिक्त कब्जा सावधानीहरू ठाउँमा राख्नु पर्छ।
मेट्रोनिडाजोलले परिधीय न्यूरोपेथी निम्त्याउन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि एक व्यक्तिले हात वा खुट्टामा कमजोरी, सुन्न, वा दुखाइ अनुभव गर्न सक्छ। CNS (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली) बिरामीहरूसँग यस औषधि लिँदा सावधानी अपनाउनु पर्छ। अक्सैक्सियाका संकेतहरू हेर्नुहोस्, जसमा स्लर्डे स्पीच, हिंड्न गाह्रो, खस्किदा वा अन्य समन्वय मुद्दाहरू समावेश छन्।
मेट्रोनिडाजोलको गम्भीर प्रतिकूल प्रभावले कम रक्त कोष गणनाहरू समावेश गर्दछ। यस कारणले, रगत कोशिका असामान्यता भएका बिरामीहरूलाई मेट्रोनिडाजोलको साथ उपचारको क्रममा नजिकबाट निरीक्षण गर्न आवश्यक पर्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले उपचार सुरू गर्नु अघि प्रयोगशालाको कामको साधारण सेटको प्रदर्शन गर्न सक्दछन्।
कोकायिन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरू, असामयिक रोगले असमय बुढोपन, असामान्य रूपमा सानो टाउको, र वृद्धि र सिकाइ ढिलाइको कारण मेट्रोनिडाजोल लिनुहुन्न। ड्रगले कलेजो विफलताको लागि बढेको जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले मेट्रोनिडाजोल आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्दछन् भने उनीहरू उपचार अघि र पछाडि कलेजोको कार्य जाँच गर्न सक्छन्। निम्न लि medication्क क्षति को संकेतहरु को लागी हेर्नुहोस् जब यो औषधि लिनुहुन्छ:
छाला वा आँखा पहेलो (पीलिया)
गम्भीर दायाँपट्टि पेट दुख्ने
मतली र / वा बान्ता
मेट्रोनिडाजोल गर्भवती भएको बेला
मेट्रोनिडाजोल एक एफडीए गर्भावस्था कोटि बी औषधि हो र गर्भावस्थाको समयमा प्रयोगको लागि अनुमोदित हुन्छ। यसको मतलब पशुको अध्ययनले भ्रुणलाई कुनै हानी पुर्याउँदैन, तर मानव अध्ययन अझै पनि जोखिम निर्धारण गर्न आवश्यक छ। गर्भावस्थामा मेट्रोनिडाजोल लिदा जन्म दोष वा गर्भपातका लागि जोखिम देखाउन केही डेटा सीमित छ।
मेट्रोनिडाजोल पहिलो त्रैमासिकको बेला ट्राइकोमोनिआसिस, एसटीआई (यौन संक्रमण) को लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। उपचार नगरेको ट्राइकोमोनिआसिस संक्रमणले प्रिन्टर्म डेलिभरीको सम्भावना बढाउन सक्छ। त्यहाँ कम जन्म तौल भएको शिशुको लागि बढेको जोखिम पनि छ। यदि आमालाई सक्रिय संक्रमण छ भने, यो योनि प्रसवको समयमा बच्चामा सार्न सकिन्छ।
काउन्टर मा चिसो को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
स्तनपान गर्दा मेट्रोनिडाजोल
यद्यपि मेट्रोनिडाजोल स्तनपानको बखत सिफारिस गर्न सकिन्छ, यो स्तनको दुधमा यात्रा गर्न सक्दछ। यसले शिशुमा पखाला र / वा मौखिक मुटुको कारण हुन सक्छ। यदि मेट्रोनिडाजोलको एक ठूलो डोज निर्धारित गरिएको छ भने, एउटी आमाले उपचारको अवधिभरि उनको दुध पम्प गर्ने र थप २ 24 घण्टा मेट्रोनिडाजोल रोके पछि थप दूध खानु पर्छ।
मेट्रोनिडाजोल र बच्चाहरू
मेट्रोनिडाजोल बच्चाहरूमा प्रयोगको लागि अनुमोदित छ। बच्चाहरूले मेट्रोनिडाजोल लिन सक्छन् अमेबियासिस, ट्राइकोमोनिआसिस सहित केहि संक्रमणहरूको लागि, सी मुश्किल संक्रमण (C फरक।), वा H. pylori। यदि बच्चाको मृगौला वा कलेजो समस्याको इतिहास छ भने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले आधा खुराक घटाउने निर्णय गर्न सक्दछ।
त्यहाँ मेट्रोनिडाजोल लिने केहि सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाहरू छन्। उपचार सुरु गर्नु अघि व्यक्तिहरूले उनीहरूको डाक्टरलाई उनीहरूले कुन औषधि लिइरहेका छन् भन्नै पर्छ।
केहि सम्भावित अन्तर्क्रियामा समावेश छन्:
डिसुलफिराम: डिसुलफिराम , रक्सीलाई पुनःप्राप्तिको लागि प्रयोग गरिएको एक औषधि, मेट्रोनिडाजोलसँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाको लागि। यो गम्भीर प्रतिक्रियाले भ्रम, भ्रम, वा भ्रमहरू समावेश गर्दछ। कम्तिमा दुई हप्ता मेट्रोनिडाजोल सुरु गर्नु अघि डिस्ल्फिराम लिनबाट बच्नुहोस्।
रगत पातलो: रगत पातलोहरू, जस्तै वारफेरिनसँग मेट्रोनिडाजोल लिदा सावधानी अपनाउनुहोस्। यी औषधीहरू सँगै लिएर एक व्यक्ति अधिक सजिलै रगत गर्न सक्छ। एक व्यक्तिको पीटी र आईएनआर उपचारको अघि र उपचारको लागि जाँच गर्नु आवश्यक पर्दछ त्यसैले वारफेरिन डोजलाई सोही अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ।
लिथियम: मेट्रोनिडाजोलले शरीरबाट लिथियम हटाउने तरिकाको साथ अन्तर्क्रिया गर्दछ, जसले सम्भावित विषाक्त प्रभाव निम्त्याउँछ।
बुसल्फान: मेट्रोनिडाजोललाई केमोथेरापी उपचार, बुसल्फानबाट टाढा राख्नु पर्छ। मेट्रोनिडाजोलले शरीरमा बुसफ्यानको मात्रा बढाउन र विषाक्त मात्रामा निम्त्याउन सक्छ।
रक्सी: व्यक्तिले मेट्रोनिडाजोल लिनुहुँदा रक्सी पिउनु हुँदैन। यो कुराकानीको कारण गम्भीर मतली, बान्ता, फ्लशिंग, चक्कर आउने, टाउको दुख्ने, र अस्वस्थ हुने सामान्य लक्षणहरू निम्त्याउँछ। मादक पेय पदार्थको थपमा, व्यक्तिहरूले रक्सी समावेश गर्ने अन्य उत्पादनहरू त्याग्न आवश्यक छ। केहि औषधी र खाद्य उत्पादनहरूले मदिरा वा प्रोपेलिन ग्लाइकोल समावेश गर्दछ। घटक प्रोपेलीन ग्लाइकोल एक सिन्थेटिक फूड एडिटिभ हो जुन रक्सी परिवारमा समूहीकृत छ, त्यसैले यो पनि बेवास्ता गर्नु उत्तम हुन्छ। मेट्रोनिडाजोल लिनु अघि कुनै पनि हालको ओभर-द-काउन्टर र प्रिस्क्रिप्शन ड्रगलाई डाक्टरसँग छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
कसरी मेट्रोनिडाजोल साइड इफेक्टबाट बच्ने
मेट्रोनिडाजोल सबैको लागि ठीक नहुन सक्छ, त्यसैले उपचार सुरु गर्नु अघि स्वास्थ्य उपचार प्रदायकसँग औषधि छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। केहि साइड इफेक्टले मेट्रोनिडाजोलसँग असहज उपचार गर्न सक्दछ, तर त्यहाँ यी साइड इफेक्टहरू कम गर्न र कम गर्न र उपचारलाई बढी सहन योग्य बनाउने तरिकाहरू छन्।
मेट्रोनिडाजोल लिँदा प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरूलाई रोक्न केहि तरिकाहरू:
१. निर्देशितको रूपमा मेट्रोनिडाजोल लिनुहोस्
व्यक्तिले मेट्रोनिडाजोल लिँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्दछ। खुराक र उपचार के संक्रमण को उपचार गरीरहेको छ मा निर्भर गर्दछ। किनकि मेट्रोनिडाजोल बिभिन्न प्रकारको फॉर्म्युलेसनमा उपलब्ध छ, एक डाक्टरले संक्रमणको प्रकारको लागि उपयुक्त भए कम साइड इफेक्टहरू कम गर्न मद्दतको लागि सामयिक वा योनी फार्मुलेसन तोक्न सक्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले दिनमा एकचोटि एकचोटि डोज, वा एकल एक पटकको खुराक सिफारिश गर्न सक्दछन्। औषधि उठाउँदा फार्मेसीले प्रदान गरेको औषधि जानकारी मार्फत पढ्न महत्त्वपूर्ण छ।
२. खानाको साथ मेट्रोनिडाजोल लिनुहोस्
मौखिक मेट्रोनिडाजोलले पेटलाई दु: ख दिन सक्छ, वा बान्ता पनि हुन सक्छ। साइड पेट प्रभाव खराब हुन सक्छ जब खाली पेटमा मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट वा क्याप्सूल लिनुहुन्छ। जबसम्म मेट्रोनिडाजोल विस्तारित-रिलीज हुँदैन, खाना वा स्नैकको साथ जोडी डोजले यी प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरूलाई देखा पर्न वा गम्भीर बन्नबाट बचाउँदछ।
Met. मेट्रोनिडाजोल लिँदा रक्सी र मदिरा युक्त उत्पादनहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
रक्सी र मेट्रोनिडाजोललाई कहिले पनि मिसिन गर्नु हुँदैन किनकि ती बढि साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँदछ। मानिसहरूले उपचारको क्रममा र तीन दिनसम्म मदिरा पिउनबाट जोगिनु पर्छ उनीहरूले प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू विकास गर्दैनन् भनेर निश्चित गर्न। केही औषधिहरू जसले रक्सी समावेश गर्दछन् Nyquil, Robitussin, र Vicks Cough समावेश गर्दछ। एक over-the-the काउन्टर औषधीमा रक्सी समावेश छ कि भनेर पत्ता लगाउन, औषधि बोतल वा बक्समा सामग्री लेबल पढ्नुहोस्।
Treatment. सम्पूर्ण उपचार पद्धति समाप्त गर्नुहोस्
उपचार समाप्त हुनु अघि मेट्रोनिडाजोल लिन रोक्नुहोस्, यदि तपाईंको लक्षणहरू हराइसकेका छन्। यो उपचारको क्रममा नै मानिसहरुलाई राम्रो महसुस गर्नु सामान्य हो, त्यसैले उपचारको सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा गर्न बिर्सनु यो महत्वपूर्ण छ। एन्टिबायोटिक उपचार पूरा नगर्दा प्रतिरोध निम्त्याउन सक्छ र यसको फलस्वरूप औषधि कम प्रभावकारी हुनेछ। मेट्रोनिडाजोल लिनको लागि महत्त्वपूर्ण छ एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले कसरी निर्धारित गर्‍यो।
Do. दिनभर समान रूपमा खुराक फैलाउनुहोस्
मेट्रोनिडाजोलको डोज दिनभरि समान रूपमा फैलिनुपर्दछ जब बहु खुराकहरू दिइन्छ। यदि व्यक्तिले एक डोज याद गरे भने, तिनीहरूले याद गरेपछि मिस गरेको खुराक लिनु पर्छ। एकै समयमा दुई खुराक नलिन महत्वपूर्ण छ। यदि मानिसहरूलाई उनीहरूको औषधि लिन सम्झनमा समस्या आएको छ भने, उनीहरूले उपचारको क्रममा एउटा रिमाइन्डरको रूपमा टाइमर सेट गर्नुपर्दछ वा एउटा पिलबक्स प्रयोग गर्नुपर्दछ।
Zantac लिए पछि म कहिले सम्म रक्सी पिउन को लागी पर्खनु पर्छ?
।मेट्रोनिडाजोलबाट उपचार सुरु गर्नु अघि सबै औषधिहरूको बारेमा डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्
केहि औषधीहरूले मेट्रोनिडाजोलसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, त्यसैले व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूले उनीहरूको डाक्टरसँग लिईएको कुनै पनि सल्लाहहरूको साथसाथै-काउन्टर र हर्बल सप्लीमेन्टहरू छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उपचारको क्रममा लागूपदार्थको कुराकानीको लागि कुनै जोखिम छ कि छैन भनेर एक डाक्टरले तोक्नेछ यदि अन्तर्क्रिया सम्भव छ भने, एक डाक्टरले वैकल्पिक औषधिले उपचार गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ।
You. यदि तपाईं ट्राईकोमोनिआसिसको लागि मेट्रोनिडाजोल लिदै हुनुहुन्छ भने यौन सम्बन्ध राख्नुहोस्
ट्राइकोमोनिआसिस एक यौन संक्रमित संक्रमण हो, जसको मतलब यो हो कि कसैसँग यौन सम्बन्ध राख्नुको परिणामस्वरूप मानिसहरू संक्रमित भए। मेट्रोनिडाजोल एक साधारण औषधि हो जुन यस संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि कसैलाई ट्राइकोमोनिआसिसको लागि उपचार गरिदैछ भने, उनीहरूको पार्टनर (हरू) लाई पनि उपचार गर्न आवश्यक पर्दछ। यसले मानिसहरूलाई उपचार समाप्त भएपछि पुन: संक्रमित हुनबाट बचाउँछ। एन्टिबायोटिकको सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त नभएसम्म यौन संभोग नगर्नुहोस् र स्वास्थ्यकर्मीद्वारा अनुमोदन प्राप्त गरिएको छ। यो मेट्रोनिडाजोलको योनी जेल फार्म प्रयोग गर्दा यौन संभोगबाट बच्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।
।।एक प्रोबायोटिक लिनुहोस्
एन्टिबायोटिक थेरापी लिइरहेको बेला प्रोबायोटिक प्रयोग गर्दै जस्तै मौखिक मेट्रोनिडाजोलले पेटको दुखाइ र पखाला जस्ता साइड इफेक्टहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। प्रोबायोटिकले एन्टिबायोटिकको साथ बिग्रेको राम्रो ब्याक्टेरियाको साथ आंतहरूलाई पूरक बनाउन मद्दत गर्दछ। प्रोबियोटिक डोजबाट कम से कम २ घण्टा सम्म एन्टिबायोटिक खुराक अलग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। प्रोबायोटिक्स फार्मेसी र किराने स्टोरहरूमा खरीद गर्न उपलब्ध छन्।
प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू , Epocrates
मेट्रोनिडाजोल , Epocrates
Flagyl मेट्रोनिडाजोल ट्याबलेटहरू , संघीय औषधि प्रशासन (एफडीए)
ट्राइकोमोनिआसिस , रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू
Flagyl ईआर , संघीय औषधि प्रशासन (एफडीए)
मेट्रोनिडाजोल क्रीम , डेलीमेड
मेट्रोनिडाजोल लोशन , संघीय औषधि प्रशासन (एफडीए)
मेट्रोनिडाजोल योनी जेल , संघीय औषधि प्रशासन (एफडीए)
सियालिसले बीमा बिना कति खर्च गर्छ?
Concerta vs Vyvanse: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
मासिक धर्म ऐंठन को लागी सबै भन्दा राम्रो नुस्खा मांसपेशी आराम
गर्भावस्था मा के दुखाई को औषधि लिन सक्छु?
खानाहरु कि तपाइँ शल्यक्रिया पछि poop मद्दत
योजना बी गोली ४ 48 घण्टा पछि प्रभावी
के तपाइँ योजना बी ठीक पछि लिन सक्नुहुन्छ